25 Awesome Social Media Ngwaọrụ | Martech Zone
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dị iche na ebumnuche ha na atụmatụ ha. Nke a infographic si Mgbakọ 2013 Social Media Strategies na-agbaji edemede nke ọma.
Mgbe ị na-eme atụmatụ atụmatụ mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ ndị nwere maka njikwa mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịba ụba. Anyị achịkọtara nnukwu ngwaọrụ 25 iji mee ka gị na ndị otu gị bido, kewaa ụzọ 5 nke ngwa ọrụ: Ntị gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkparịta ụka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmekọrịta ndị mmadụ.
Ọ dị mma ịhụ onye nkwado anyị, Meltwater Buzz, topping na ndepụta nke nyiwe Social - anyị na-enweta nsonaazụ dị ịtụnanya site na ngwaọrụ!
Tags: agora usuochichiNdiegwuiche icheenyi mgbasa oziagbakpọtinye aka na sayensịotuhootsuitekloutKredgbazee mmirimmiri gbazeepeekanalyticsezipụobere akpamkpọtụnanị tụrụnchịkọta mmadụMkparịta ụka mmekọrịtaMmetụta Ọhana-elekọta mmadụ na-ege ntịahịa mmadụelekọta mmadụndị na-elekọta mmadụisi okwuUdogwuifesaChidinmaOnyebuchimalitere ịrịa ọkụ
dotMailer EasyEditor: Dọrọ na Drop Email Na-edezi
Nov 4, 2013 na 3:05 AM
Ndewo Douglas, daalụ maka ndepụta gị, ọ na-enye aka ịhazi ihu na ngalaba nke mgbasa ozi mmekọrịta social Mana m na-atụ uche quintly na ndepụta ahụ. Ọ bụ mbụ allfacebookstats. Taa ọ bụ ihe kasị ọkachamara ngwá ọrụ. Kedu ihe dị mma banyere ya? I nwere ihe karịrị 100 metrics iji nyochaa Facebook, Twitter, YouTube na GooglePlus. Ma ị na-enwe ike iche iche na nyocha gị dị iche iche ka ọ dabaa na mkpa gị. O na - enyere aka ichoputa uzo ahia gi kachasi nma. Kwesịrị ịnwale ya.
Nov 4, 2013 na 2:31 PM
Daalụ nke ukwuu maka itinye Postling, nke bụkwa akụkụ nke ikpo okwu LocalVox. Anyị na-asọpụrụ ịnọ na ndepụta gị dị ka otu ndị na-elekwasị anya na mpaghara nke mgbasa ozi mgbasa ozi na nsogbu ndị pụrụ iche dị na ya. Anyị debere nke a na blọọgụ anyị ma daalụ!
Nov 6, 2013 na 3:27 AM
Daalụ maka ịkekọrịta akụ a .. nnukwu ngwaọrụ ị kesara ..
Nov 8, 2013 na 12:35 AM
Daalụ maka ọmarịcha ọkwa gbasara ngwa mgbasa ozi mmekọrịta nke ịkekọrịta. na oge nke oge a nwere ọtụtụ ngwaọrụ iji nyochaa facebook, twitter na google gbakwunyere ma nwee ike hazie nyocha gị nke na-esite na mkpa gị. Ọ na-enyere aka ịchọpụta otu n'ime usoro ịzụ ahịa gị.
Nov 9, 2013 na 6:53 AM
Zuru okè enyemaka na-ekele 🙂
Ihe m masịrị onwe m bụ Blog2Social. Ekwenyere m n'onwe m na Blog2Social bụ otu n'ime nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ọ na-enweghị usoro ntinye ihe nkesa na-agaghị eme. Ọ na - enye onye na - ede akwụkwọ ohere ịga n’ihu na ntanetị mgbasa ozi nke Blog2Social Word-press, nke edere ederede ederede zuru ezu. Mgbe ịhazigharị ederede onye edemede ahụ na-ahazi posts ma ọ bụ bipụta ha n'egbughị oge.